Hedonism amin'ny psikology, filozofia ary fivavahana
Hedonisma amin'ny tontolo maoderina - ny fiheverana sy ny fiantraikany
Hedonisma no fotopampianarana fa ny olona iray dia manao ny asany rehetra noho ny fahafinaretany manokana, noho izany, tsy misy afa-mieritreritra afa-tsy ny dikan'ny fiainana. Ny fomba toy izany dia toa manambaka ho an'ny sasany, saingy tsy misy fahamarinana marina, ka ny famaranana dia tsy maintsy mahaleotena.
Hedonism - inona io?
Ny fandikan-teny avy amin'ny teny hebreo tranainy dia mahafinaritra na fahafinaretana. Ny fotopampianarana mitondra ity anarana ity, dia miresaka momba ny maha-ara-dalàna ny fitadiavana ny fahatsapana mahafinaritra, noho izany ilay olona dia mazoto na tsy mihetsika eo amin'io lalana io. Ary satria io dia manana ny toetran'olombelona, ​​dia tena lojika tokoa ny mitarika ny fihetsika ataonao mba hahazoana fifaliana. Ny fampianarana rehetra dia mifarana amin'ity fanambarana ity, satria tsy nisy namorona ity rafitra ity, noho izany dia mety ho samy hafa be ny fitondrantenan'ireo mpanaraka azy.
Ny fotopampianarana dia teraka talohan'ny vanim-potoana nisy antsika, saingy ny hepatita tao amin'ny psikology ara-tsosialy dia nanomboka noraisina tamin'ny taonjato faha-20. Misy hevitra roa:
ho avy - ny hetsika dia mifandraika amin'ny fanantenana ny fahafinaretana;
Izany - ny hetsika dia mikendry ny hahazo fahafinaretana haingana.
Ny tsy fisian'ny iononisma ara-psikolojika dia eo amin'ny famindrana ny anjara andraikitra fototra amin'ny fihetseham-po, ka mamela ny fisainana eo amin'ny sehatra. Raha ny marina, ny fihetseham-po dia tsy mahazatra afa-tsy ny mafana ihany rehefa mametraka ny rafitrao manokana. Na izany aza, ny hedonisma dia ahafahanao mandinika ny fisalasalan'ny olona noho ny fahazoana fahafinaretana ara-batana sy zava-baventy, izay matetika tsy misy dikany marina. Ny fianarana toy izany dia manan-danja noho ny fitombon'ny isan'ny olona mitady fahafinaretana lehibe.
Hedonism amin'ny filôzôfia
Aristippus (435-355 talohan'i JK) no nanorina ny fampianarana, mino fa ny fanahin'olombelona dia niaina fanjakana roa - fahafinaretana sy fanaintainana. Ny lalana mankany amin'ny fahasambarana dia ny fisorohana ny fahatsapana hafahafa sy ny fikatsahana zavatra mahafinaritra. Ny fiheverana dia amin'ny lafiny ara-batana. Nilaza i Epicurus fa ny hafanana amin'ny filôzôfia dia ny fahafaham-po tanteraka amin'ny fanirian'ny olona. Ny tanjona dia ny fahafinaretana, fa ny fahafahana amin'ny tsy fahasambarana. Araka ny heviny dia ny ataraxia, ny fiadanan-tsaina sy ny fahaleovan-tena amin'ny fampiasana tombontsoa rehetra no mampiavaka azy.
Niely patrana nandritra ny taonjato faha-18 ny fankamasinana. Ny aristokrasia, indrindra fa any Frantsa, dia matetika no mahatsapa fa ny fahazoana fahafinaretana tsotra indrindra. I Jeremiah Bentham, izay nandika ny hexonisma tamin'ny ambaratonga vaovao, dia nanampy tamin'ny famerenana ny filôzôfian'ny filôzôfia, ka ny fototry ny foto-kevitr'izy ireo momba ny fampiasana fitantanam-po. Izany dia manome ny fitondran-tenan'ny fiaraha-monina izay ahafahan'ny mpikambana rehetra mameno ny fifaliana indrindra.
Fitsipika momba ny fiainana any an-danitra
Ny fotopampianarana dia tsy voavolavola tanteraka, noho izany dia tsy misy fitsipi-pitondran-tena mazava, ary tsy nisy olona nanao ny fitsipiky ny hedonisma. Misy lahatsoratra iray monja: ny tanjona faratampon'ny olombelona dia ny ho sambatra. Ary noho izany antony izany dia ilaina ny mampihena ny isan'ny fahatsapana mampalahelo ary mifantoka amin'ny zavatra mitondra fifaliana. Izany hoe, mba hahatakarana ny dikan'ny hoe hedonisma dia ilaina noho ny fahatsapany manokana.
Hedonism - sa tsara sa ratsy?
Tsy misy valiny tsy mazava, miankina amin'ny fandikana manokana ny hevitra. Ho an'ny sasany, ny hedonisma dia ny fikatsahana ny fahatsapana vaovao sy mafimafy kokoa ary ny sasany dia mihevitra ny tenany ho mpanaraka ny fampianarana noho ny fitiavana akanjo tsara tarehy sy ny fananganana ny fandroana miaraka amin'ny foitra manitra. Mazava fa ny faniriana hahatonga ny fahazarana isan'andro ho mahasambatra kokoa, dia tsy manimba na inona na inona. Raha manao ny fahafinaretana fahafinaretana ho azy ianao, dia afaka ny hizaka fahoriana ihany. Eritrereto ny endri-panavotany mampidi-doza.
Fahabetsahana . Mihamitombo tsikelikely ny fahafinaretana efa mahazatra, ilaina ny dingana vaovao, saingy rehefa lasana izy ireo dia tsy misy zavatra hafa afaka mitondra fifaliana.
Fandaniam-potoana . Ho fitadiavana fahafinaretana, mora ny tsy mahita ny fotoana hanaovana ny dingana izay manapa-kevitra ny amin'ny ho avy.
Fahasalamana . Ny fiantraikan'ny fifaliana amin'ny fiaramanidina dia misy fiantraikany ratsy amin'ny fahasalamana.
Hedonism sy fitiavan-tena
Ny lafiny filôzôfika amin'ity fampianarana ity dia mitovy amin'ny fitiavan-tena, nefa tsy tanteraka izany. Ny fitsipiky ny hedonisma dia tsy mametraka ny fifantohana amin'ny tena irery, tsy voarara ny mikarakara sy mifaly amin'ny hafa. Misy endrika roa: fitiavan-tena sy universal. Ny voalohany dia miavaka amin'ny fifantohana amin'ny fahatsapana manokana, na dia tsy mitovy amin'ny hafa aza izy ireo. Ho an'ny mpankafy ny endrika faharoa dia zava-dehibe ny fahafahana ho an'ireo izay akaiky azy ireo.
Hedonism sy Christianity
Raha ny fijerin'ny fivavahana, ny zava-drehetra izay tsy mikendry ny hanompo an'Andriamanitra dia zava-poana izay tsy mendrika ny hisintona. Noho izany, ny otrikisma dia fahotana ho an'ny Kristiana. Tsy vitan'ny hoe miala amin'ny tanjona ambony indrindra izy, fa manolo izany amin'ny faniriana hanangona harena eto an-tany. Raha miresaka momba ny trangan-javatra amin'ny ankapobeny isika, raha tsy mandinika ny tranga manokana, dia tsy azo lazaina hoe heloka bevava ny faniriana mahazatra hampiononana. Ny endriky ny hafanana amin'ny ankapobeny koa dia tsy mitondra mandrakariva ho mpanota, ny fandraisana ny fanampian'ny olona hafa ho an'ny Kristiana.
Tsy afaka milaza ianao fa misy hôtônista iray mpanota. Ny tranga tsirairay dia tokony hodinihina. Raha tsy azonao atao ny manavaka ny toe-javatra amin'ny anao manokana, tsy te handika ny finoanao manokana ianao, ary amin'ny fampiononana tsy azonao atao, dia afaka manontany amin'ny pretra ianao. Mahafantatra tsara kokoa ireo soratra masina izy ary manana traikefa amin'ny famahana ny fifanoherana toy izany. Marina koa fa mety ho diso izy, ka ny fanapahan-kevitra farany dia mijanona ho an'ilay olona ihany.
Ao amin'ny fiaraha-monina maoderina, saika olo-malaza rehetra dia afaka mametraka "testony" momba ny "hedonista". Na dia ny sasany aza dia tafiditra ao anatin'ny fiantrana, dia tsy avy afa-tsy ny nanome fahafaham-po ny hetahetany manokana ho an'ny fahatsapana mahafinaritra. Tsy natao ho an'ny firenentsika fotsiny izany, fa ireo mpihetseham-batana amin'ny fiainana feno hafaliana. Taorian'ny nahatsapan'i Epicurus ny endriky ny hondonisma manokana, dia nahazo fiainana vaovao tao amin'ny Renaissance ny fampianarana. Avy eo ny mpanaraka azy dia Petrarch, Boccaccio ary Raimondi.
Avy eo i Adrian Helvetius sy Spinoza dia nanaraka ny fampianarana, nifanaraka tamin'ny fahafinaretan'ny olona amin'ny tombotsoam-bahoaka. Thomas Hobbes koa dia nandresy lahatra noho ny fetra, nanolotra ny fitsipika hoe "aza atao amin'ny hafa tahaka ny tsy tianao hatao aminao." Ity fitsipika ity dia tsy nanaraka ny rehetra, ny ohatra tena tsara indrindra amin'ny fandavana ny rafitra ara-pivavahana, ara-moraly ary ara-dalàna dia ny asan'ny Marquis de Sade.
Boky momba ny hafanana
Ny trangan-javatra dia mahaliana ny maro, dia nokarohin'ny filozofa sy psikologista ny filazalazana, ary azo jerena ao amin'ny tantara fiction ihany koa ireo famaritana. Ireto misy boky momba ny hafanana.
"Principles of Ethics" George Moore . Ny filozofa Anglisy dia misaintsaina ny toetoetran'ilay tranga ary manondro ny fahadisoana iray - fiaraha-miasan'ny hevitra tsara sy ny fomba hanatanterahana izany.
"Ny atidoha sy ny fahafinaretana" nataon'i David Linden . Ity boky ity dia miresaka momba ireo zava-bita farany teo amin'ny sehatry ny neuroscience, izay nahafahana nijery vaovao momba ny fahazoana fahafinaretana sy ny fananganana fiankinan-doha amin'izany.
"Sarin'i Dorian Gray" Oscar Wilde . Ny asa fanta-daza iray, izay nandalo mihoatra ny dikan-drakitra iray, dia mampiseho ireo endrika faran'izay ratsy sy ny vokatr'ireo hedonisma.
"Tontolo Vaovao mandoza" nataon'i Aldous Huxley . Ny fiainam-piarahamonina rehetra dia mifototra amin'ny fitsipiky ny fahafinaretana. Ny valin'ny fanandramana toy izany dia voafaritra ao anatin'ilay asa.
"The Secret Secret" Bernard Verber . Ireo mahery fo amin'ity tantara nofinofy ity dia miezaka ny mijery ny hevitry ny olombelona ary mahita ny antony hanaovana asa.
Inona no mampiavaka ny olona iray?
Teny sy fihetsika vatana
Ny psikology momba ny fampandrosoana tsy voajanahary
Ny endriky ny fisainana manokana
Fotsifotsy an'i Jessner
Sakafo avy amin'ny radish - hevitra niavaka ho an'ny sakafo tsara
Fanipahana ny volony any an-trano
Neurosis amin'ny zaza - soritr'aretina
Vavaka an'i Peter sy Fevronia amin'ny fotoana rehetra
Urolithiasis amin'ny saka
Ahoana no hifidianana vy?
Sinus arrhythmia amin'ny ankizy
Kaviar avy amin'ny fofona amin'ny ririnina